Dziviriro Yakafanira Disposable Kurapa Kudzivirira Kupfeka
Chishandiso: Chinyorwa Chemuchipatara: Basa Risina-rakarukwa: Kudzivirira Kusvibisa Ruvara: Ichena muchengeti: Vatengi 'Ruzivo General Feature Yechinhu chakagadzika, chisina kuremerwa uye chinogadziriswa zvinhu zveakasarudzika akapfeka Nyaradzo Particle-akasimba uye kupuruzira-akasununguka Yemapepa wetting kusakanganisa zvinhu uye silicone Dziviriro Zvinhu Bhuruu -akavhara seams yekudzivirira kwakanyanya uye yakanaka kuonekera Kuzvishongedza-zipper firati yekuchengetedza kwakakodzera kuchengetedza Anti-static zvivakwa Kudzivirirwa kubva kuhutachiona hutachiona Comfort Featur ...
PVC American NSF yakasimbiswa magurovhosi
Ichi chigadzirwa chinotsigirwa neNSF Icho chakagadzirwa neyekugadzira PVC zvinhu uye haina mapuroteni mu latex anogona kukonzeresa kusangana kwevanhu. Avo vane allergic reaction kune latex magurovhosi vanogona kushandisa ichi chigadzirwa. Yasarudzwa formula, tekinoroji yepamberi, kunzwa kupfava kwemaoko, kugadzikana kwekurwisa-skid, kushanda kwakapusa Maitiro ekugadzira echigadzirwa ichi anoenderana zvakakwana nezvinodiwa zvekugadzira zveNational Foundation zvekugadziriswa kwechikafu pamwe nekugadzira chikafu. Magurovhosi haasi ekutakura ...
Disposable yekurapa PVC magurovhosi (yakasikwa ruvara) · Ichi chigadzirwa chakapfuura US FDA certification uye EU CE chitupa. · Yakagadzirwa neyekugadzira PVC zvinhu, isina mapuroteni mune latex inogona kukonzeresa vanhu kusagadzikana. Vaya vane allergic kune latex magurovhosi vanogona kushandisa ichi chigadzirwa. · Yakasarudzwa formula, advanced technology, kunzwa kupfava ruoko, wakasununguka anti-skid, inoshandisika kushanda. Inoshanda kune zvakawanda zvinoenderana nekuongororwa kwachiremba, mazino, rubatsiro rwekutanga uye mukoti. Asiri-muchetura, anokuvadza uye anorasa ...
Disposable yekurapa PVC magurovhosi (mavara echisikigo)
Disposable yekurapa PVC magurovhosi (yakasikwa ruvara) · Ichi chigadzirwa chakapfuura US FDA certification, EU CE certification, ISO9001, ISO13485 certification. · Yakagadzirwa neyekugadzira PVC zvinhu, isina mapuroteni mune latex inogona kukonzeresa vanhu kusagadzikana. Vaya vane allergic kune latex magurovhosi vanogona kushandisa ichi chigadzirwa. · Yakasarudzwa formula, advanced technology, kunzwa kupfava ruoko, wakasununguka anti-skid, inoshandisika kushanda. Inoshanda kune zvakawanda zvinoenderana nekuongororwa kwachiremba, mazino, rubatsiro rwekutanga uye mukoti. ...
Magurovhosi e PE
Ichi chigadzirwa chinonatswa kubva kumusoro-kumanikidza polyethylene sezvinhu zvakasviba. Asina-chepfu, anokuvadza, asina kunaka, asina mwenje uye akapfava. Zvakakodzera kutakura, icho chigadzirwa chakamira chekurapa kuongororwa kwezvirwere, kuongororwa kwema laboratori, uye kuchengetedzwa kwevarwere vanoyamwisa.
Disposable Kuparadzaniswa Medical Sterile Kuvhiya Gown
Model: ORT- gown inoshanda Material: PVC, PP + PE, PE, PP SMS Zvimiro: kuraswa, anti-static Certification: ISO13485, FDA, CE Propane oxide sterilization: propane oxide sterilization Zvikumbiro: zvipatara, zvipatara, varwere, maLabhoratobi echikadzi Mapoka. : Logo kudhinda: hapana logo kudhinda Kukura: S - XXXL Mhando: Kuvhiya zvipfeko zvinopa Chitupa: CE / ISO13485 / FDA Ruvara: bhuruu, girazi Zita: anoshanda gown Packaging: 5 zvimedu zvecoroteed mapepa Certification: ISO, CE Disposable s ...
covid 19 anti fog kuchengetedza girazi ekudzivirira magirazi
Kuchengetedza goggles ndiyo yakasarudzika mhando yegirazi yakagadzirirwa kudzivirira radiation, makemikari, mehendi uye akasiyana maidhiutsi ekukuvara kwechiedza. Kune marudzi mazhinji emagirazi ekudzivirira, akajairika egirazi regirazi, magirazi ekushamisika, magirazi emakemikari uye magirazi ekudzivirira-radiation. Model kwete. : ORT yekudzivirira magirazi Chinyorwa: kukwenya-chiratidzo PC lenzi, nylon chimiro Rudzi: yevakuru Ruvara: pachena zvinhu: zvinoraswa, zvakasununguka chengetedzo Logo: tsika Muenzaniso: inowanikwa Mode yekutakura: negungwa ...
chigadzirwa saizi: 33 * 22cm PET firimu ukobvu: 0.25mm kutsanangurwa kwezvinhu: PET anti-fog pepa + chena chipanje dhiza + elastic bhendi chigadzirwa uremu: anenge 43g zvigadzirwa mabasa: anti-dhiragi, anti-utsi, guruva uye jecha Chigadzirwa Chinyorwa: Chengetedzwa mask Chigadzirwa saizi] 33 * 22cm PET firimu ukobvu: 0.25mm Tsanangudzo yemuchadenga: PET anti-fog pepa + chena chipanje strip + elastic band Chigadzirwa uremu: anenge 43 g Chigadzirwa chebasa: anti-kupuruzira, anti-soot, guruva nejecha Uchishandisa step Featurs ...